किन लेखिन सामाजीक सञ्जालमा गायिका ज्योती मगरले आमा बन्ने रहर छ, छोरी भए गर्भपतन गर्छु !  Hamrosandesh.com
म भर्खर १९ वर्षकी थिएँ । पढ्दै जागिर गर्ने सिलसिलामा २०४८ सालमा चितवनमा उहाँसँग भेट भो । सम्पन्न परिवारकी मलाई जागिर गर्नै पर्ने बाध्यता नभए पनि केही गर्नुपर्छ भन्ने सोचले चाइनिज इटा टायल कम्पनीमा लेखापालको रुपमा काम गर्न थाले । उहाँ त्यही कम्पनीको मेनेजर । दिनहुँको भेटघाट र संगतले प्रेम बस्यो । उहाँ क्षेत्री, म बाहुन । जात नमिल्ने । तर पनि मान्छेको जात भन्दा मन हेर्नुपर्छ भन्ने विचार थियो मेरो । उहाँले मलाई निकै प्रभावित गर्नु भो । विहे गरेर खुसीको जीवन बिताउने सपना देखाउनु भो । उहाँको पारिवारिक आर्थिक अवस्था, शैक्षिक अवस्था, पारिवारिक पृष्ठभूमि केही जानकारी लिइन मैले । श्रीमान राम्रो भए सबै राम्रो हुन्छ भन्ने लाग्थ्यो । मैले परिवारलाई जानकारी नदिइ उहाँसँग भागे । भागेर ईण्डिया गयौं । बिहेको एक महिनामै गर्भ बस्यो । आठ महिनाकी गर्भवती हुँदा नेपाल आयौं । नेपाल आए पछि मात्रै थाहा पाएँ की, उहाँको त घरमा श्रीमती, दुई छोरी र एक छोरा रहेछन् । मैले लोग्नेबाट धोका पाएको बुझेँ । त्यो समयमा माइतीतिरकाले छुटाउनका लागि अति कोशिस गरे । पेटमा उसैको सन्तान छ । उसलाई छोडेर म कहाँ जाऔं ? सन्तानलाई कसको नाम दिऔं भन्दै माइतीको कुरा सुनिन । उहाँकै पछि लागें । ललितपुरमा उहाँको घरमा जेठी श्रीमती र छोराछोरी बस्थे । म कोठा भाडामा लिएर बस्न थाले । उहाँकी जेठी श्रीमती देखेर मलाई हिनताबोध हुन्छ । सोच्दै नसोचेको कुरा भोग्नु परेपछि मान्छे विरक्त हुँदोरहेछ । मेरो जीवनमा सौता हुन्छ र छ भन्ने कुराको कल्पना समेत नगरेकी म अनजानमा उहाँको सौता हुन पुगे । तर उहाँप्रति मलाई सम्मान छ । म उहाँको जीवनमा सौता बनेर जाँदा उहाँलाई कति पीडा भयो होला ? म त्यो कुराको महशुस गर्छु । तर उहाँले जबदेखि मलाई बिहे गर्नु भो जेठीलाई फर्केर पनि हेर्नु भएन । मेरो श्रीमती हो भन्ने अलिकति पनि महसुस गर्नुभएन । त्यसकारण पनि मैले उहाँबाटका दुई छोरीको बिहे आफै गरिदिएँ । छोरालाई पनि आफैले जागिर लगाइदिएकी छु । उहाँ बिरामी हुँदा आफैले स्याहार सम्भार गरेकी छु । पिठिउँमा बोकेर एम्बुलेन्ससम्म पुर्याएकी छु । उहाँप्रति मलाई कुनै गुनासो छैन । २०४९ सालमा जेठो छोरा जन्मियो । २०५२ सालमा कान्छो छोरा । कान्छो छोरा ६ महिनाको हुँदा भाउजुको सहयोगमा गोल्छा कम्पनीमा लेखापालको जागिर पाएँ । २०५२ फागुन २ गतेबाट शुरु भएको गोल्छा कम्पनीको जागिर २०७३ सालसम्म गरेँ । उपमेयरमा उम्मेदवारी दिएसँग जागिर छोडें ।
निर्वाचन जितिसकेपछि उहाँले पटक पटक, हरेक दिन, हरेक घण्टा प्रश्न गर्न थाले पछि म सँगै हिँडिदिनुस् । म के के गर्छु । को को सँग भेट्छु । मेरो काम, कर्तव्य के हो बुझिदिनुस्, सँगै हिँडिदिनुस् भनि आग्रह गर्दा समेत म तेरो भरिया हो र त सँगै हिँड्नलाई भन्ने । उल्टै अरु अरु उपमेयर महिलाका श्रीमानको नाम लिएर उ जस्तो जोईटिंग्रे होइन म भन्ने । यसो गर्दा पनि नहुने, उसो गर्दा पनि नहुने । अब मेरो व्यक्तिगत जीवन मात्रै रहेन । हिजोसम्म म एक जना मुना अधिकारी मात्रै थिएँ । आज म ललितपुर जिल्लाको उपमेयर हो । अझ यस्ता खालका हिंसा र यातना विरुद्ध न्यायिक लडाइँ लड्नु पर्छ भन्दै अरुलाई न्यायका लागि अघि बढ्न हौसला दिने पदमा छु । म जस्तो महिलालाई त लोग्नेको पीडा बोकेर प्रहरी कार्यालय जाँदा प्रहरीले मिल्नुपर्छ भन्दै दबाब दिन्छ भने देशको दुर दराजका महिलाको अवस्था के होला ? अब म यो भन्दा धेरै लोग्नेको यातनाको शिकार हुन चाहन्न । अब न्यायिक लडाइँमा जान्छु । ललितपुरवासीको विश्वासले यो ठाउँमा आएकी छु । अबका चार वर्ष जनताको पक्षमा धक फुकाएर काम गर्ने सोच बनाएकी छु । निर्वाचन जिते पछिको एक वर्ष जनताको काम भन्दा धेरै श्रीमानका प्रश्न र छेकबारहरुको सामना गर्दै बित्यो । अब मलाई जनताको काम गर्ने कुरामा कुनै र कसैले तोकिदिएको समय सीमाले अर्थ राख्ने छैन । कुनै गोष्ठी, सेमिनारको चिठी आउँदा कसरी जाने होला भन्ने कुराले तनाव हुने छैन । जतिसुकै बेला जनताले बोलाएको ठाउँमा जानबाट कसैले रोक्ने र छेक्ने छैनन् । म स्वतन्त्र हुनेछ ।